ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၁-၃-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၁-၃-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း KIA နှင့် အစိုးရ တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ် click
- အကြမ်းဖက်မှုများတွင် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ထားသည့် ပုံစံမျိုး မြင်တွေ့နေရဟု ကိုမင်းကိုနိုင် ပြော click
- အဓိကရုဏ်း ဒုက္ခသည်များအား ကူညီခြင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ဆွေးနွေး (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခံခဲ့ရမှု ၄ လပြည့် ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြ click
- လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှု ၄ လပြည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော် (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- လက်ပံတောင်းတောင် ၄ လပြည့် (ရုပ်သံ) click
- ဂျိတ္တော အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှုတ်ထွက်ပေးရန် ဆန္ဒပြ click
- ရခိုင် တကျော့ပြန် ပဋိပက္ခတွင် ဖမ်းဆီးခံရသူ မြောက်ဦးမှ ၄ ဦး လွတ်မြောက် click
- ပေါက်တော ရပ်ကွက်မှာ NLD ရုံးခွဲသစ် ဖွင့်လှစ် (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- The Art of Transition Symposium (Yangon) ပွဲ ၂ ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ် (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- သံတွဲမြို့တွင် ရခိုင်အမျိုးသမီးတို့ ဘ၀လုံခြုံရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ပြုလုပ်မည် click
- ပထမအကြိမ်မြောက် ကရင်ရေးရာ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပခြင်း click
- ကရင့်အနာဂတ် တည်ဆောက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရန် ၃၇ ဦးပါ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း click
- ခုများတော့ ဘယ်ဝယ်ဘယ်ဆီ … (ဆောင်းပါး) click
- ကရင်နီ ခေါင်းဆောင်နဲ့ လူငယ်အကြား ကွက်လပ်များ ရှိနေဆဲ (ဆောင်းပါး) click
- အမဲရောင် သောကြာနေ့ (ဆောင်းပါး) click
- မီးဒုက္ခသည်များအတွက် အဓိက အကူအညီ နေအိမ် အဆောက်အဦး (ဆောင်းပါး) click
- BPHWT နှင့် PEDU တို့ ကျေးရွာ အကျိုးပြု အရန်သားဖွားသင်တန်း ပူးတွဲလုပ်ဆောင် click
- စစ်တွေတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား click
- လွမ်းရိပ်ဝေဝေ တက္ကသိုလ်မြေ (အက်ဆေး) click
- ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ ငွေချွေတာရန်အတွက် အရည်အချင်းမပြည့်ဝသည့် ဆရာများ ငှားရမ်း click
- အသတ်ခံရသော ပါကစ္စတန် ကျောင်းဆရာ/ဆရာမများအတွက် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားများ ကျင်းပမည် click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 9:22 PM
လက်ပံတောင်း တောင် အစီရင်ခံစာဟာ နှစ်ပေါင်း၅၀
(၇ာစုနှစ် တစ်ဝက်) နိုင်ငံကို ကြီးစိုးခြယ်လှယ်လာတဲ.
စစ်တပ် ရဲ.အခန်းကဏ္ဍ ကို ဘယ်သူမှထိပါး လို. ......
ခုလည်းမရဘူး ၊ နောင်လည်းမရဘူးဆိုတာ ......
သက်သေပြလိုက်တာပါ၊ နိုင်ငံ တစ်ခုမှာ တစ်ဖက်က စစ်တပ် ကို လုပ်ချင်ရာလုပ် ပ , စားပေးထား ပြီး တစ်ဖက်
က ဒီမိုကရေစီ ဆီသွားလို. ရမှာမဟုတ်ပါ ။